Akụkọ - Akụkọ ụlọ ọrụ - ndị ọbịa South Korea na-akwado nkwekọrịta NCG na ya na NCG
Na Jenụwarị 21st, otu ndị ahịa South Korea na-ebubata nri batara na NCG maka azụmahịa na saịtị wee kwurịta nke ọma gbasara ogo ngwaahịa, ụkpụrụ mbupụ, iwu na nnyefe. Ndị ahịa South Korea gafere site na NCG nweere onwe ha ịgafe e-commerce iji mụọ ihe ọmụma metụtara ọrụ ugbo dị elu, ma kpọtụrụ NCG maka oge ole na ole iji kparịta ụka banyere azụmahịa, ndị abụọ ahụ nwere omume enyi, na-achọ iji ọnụ abamuru, ntụkwasị obi, na njedebe, usoro otu akpa 14, mezue tọn 300 nke mbupụ ngwaahịa ngwaahịa ugbo.
N'okwu a, anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu ụkpụrụ dị mma nke ngwaahịa Anqiu dị elu, ngwa ngwa na nnyefe yana ihe ndị ọzọ metụtara ya, n'ụzọ zuru ezu dịka nnyefe ndị ahịa chọrọ. Site na ngosipụta ikpo okwu, anyị na-aga n'ihu na nkwukọrịta miri emi na mpụga arụmọrụ nke ikpo okwu, ikpo okwu n'elu ikpo okwu, ịkwụ ụgwọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ, na-egosipụta n'ụzọ zuru ezu uru nke ịrụ ọrụ nke ọma na nhazi usoro nke NCG cross-border e-commerce platform.
Ndị ọbịa Korea kwuru okwu nke ọma maka ọnọdụ arụmọrụ nke NCG cross-border e-commerce platform. N'otu oge ahụ, ha gosipụtara olile anya iji nọgide na-enwe mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na NCG ma tọọ ntọala maka inwekwu mmekọrịta na mgbanwe n'ọdịnihu. Mmekọrịta a na-egosi n'ụzọ zuru ezu uru nke usoro NC-cross-border e-commerce platform. Site na Internetntanetị, Nnukwu data na teknụzụ ozi ọgbara ọhụrụ ndị a, a ga-akwalite mbupụ nke ngwaahịa ugbo iji nweta nkwalite na-aga n'ihu. E-commerce ga-agafe ókèala ga-anọgide na-agbakwunye ọhụụ ọhụrụ na azụmaahịa mba ụwa nke ngwaahịa ugbo.